. ခြေလှမ်းဦး များ နှင့် ကခုန်ခြင်း “တစ်ဆယ့်တစ်” – ပါဝါ (100) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » . ခြေလှမ်းဦး များ နှင့် ကခုန်ခြင်း “တစ်ဆယ့်တစ်” – ပါဝါ (100)	10
. ခြေလှမ်းဦး များ နှင့် ကခုန်ခြင်း “တစ်ဆယ့်တစ်” – ပါဝါ (100)
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 4, 2015 in History | 10 comments
ဒီတစ်ခါ မဲ နံပါတ် ကို ဒေါ်ဇီဇီ ရဲ့ စာရင်းမှာ သွားပြီး ကြည့်လိုက်ချိန် ပြုံးရုံမက အသံပါထွက်ပြီး ရီ လိုက်မိတာ။
ရွာ ထဲ က ဝမ်းအော့သီ စူပါစတားအကြီးကြီး ရဲ့ နံမည် “ဘုန်းကျော်” ကို မြင်လိုက်ရလို့ပါ။
. ဖေ့စ်ဘုတ် ထဲ မှာ နာမည်ကြီးနေတာမို့ သွေးကြီးပြီး ရွာထဲ မလာတော့ တာလားမသိ။
FB Friend တစ်ယောက်က ကဘုန်းကျော် ရဲ့ အော်ဇီမှာ အိမ်ဝယ်တဲ့ အကြောင်း ပို့စ်တစ်ခု ကို ဖေ့စ်ဘုတ် ထဲ မျှထားတာ တွေ့တော့ ရွာက ကဘုန်းကျော် ဘဲ လို့ သိလိုက်ရတာ။
အဲဒီထဲ မှာ သူတို့ အိမ်လေး က ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။
သူ့ စတိုင် အတိုင်းပါဘဲ ထီမထင် ပြောလိုက်သေး။
တစ်ချို့လူများ အေးဂျင့် တွေ နဲ့ အငှား နဲ့ အိမ်ဝယ်ရတာ ကို လှောင်ထားတယ်။
သူက တော့ အင်တာနေရှင်နယ် ဘုန်းကျော် မို့ သူ့ဟာ သူ အားလုံး အစ အဆုံး လုပ်သတဲ့။
မကြားရတာ ကြာတဲ့ သူ့ စကား နဲ့ လေသံ တွေ ကို ဖတ်ပြီး တစ်ချိန်က တွေ ကို လွမ်းမိပါသေး။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်။
အဲဒါအပြီး ဗူးထဲ က မဲ ကို နှိုက်တော့ သူ့နံပါတ်ကျနေရော။
ကဘုန်းကျော် က ရွာ ကို ဝင်စ က ဒီလောက် ဂျီ ဂျီ ဂျစ်ဂျစ် မဖြစ်သေးဘူး။
. ခေသူတော့ မဟုတ် ဝင်ဝင်ချင်း မှာ ကို ပို့စ် နှစ်ပုဒ် တင်ပြီး ဝင်လာတာ။
သူ ရွာထဲ မှာ ပို့စ်တင်ပြီး ခြေလှမ်းချခဲ့တာ Sep 19, 2011 ပါ။
(၁) “. မြန်မာပြည်က သူဌေးကြီးတွေ ဘာ့ကြောင့်ကပ်စေးနဲတာလဲ” နဲ့
(၂) “မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ပက်သက်၍..” တဲ့။
နံပါတ်(၁) ပို့စ်ကတော့ မြန်မာပြည် မှာကျိကျိတက်ချမ်းသာပြီး ငွေကို ရေလို သုံးနိုင်သူ များ တိုင်းပြည်ထဲ က ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသူ များ ကို မမျှ ဘဲ နေနေသည် ကို အားမရ ဖြစ်ကာ ရေးထားခြင်းပါ။
မှန်လွန်းတော့ နာစရာ တွေ တောင် ပေါ်လာအောင် ဒဲ့ရေးတတ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အဝင်ခြေလှမ်း မှာတင် မှတ်ချက်ပေါင်း ၃၃ ခု နဲ့ စည်ကားခဲ့တာ ပါ။
အဲဒီတုန်းက အဲဒီလူ တွေ ရွာကို သတိတောင် မရနိုင် ကြတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
နံပါတ်(၂) ကတော့ ဒီအချိန်မှာ ဒီ ပို့စ် လိုမျိုး ကို ပြန်ဖော်လိုက်နိုင်တာ ကွကိုယ်တောင် ကျောသပ်နေမိသေး။
ပို့စ်ရေးသူ ကဘုန်းကျော် ကိုလဲ လှမ်းပြီး ကျောကို သပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို သတင်းလေး သူတင်ပေးခဲ့လို့ သာ သမိုင်းမှတ်တမ်း နဲ့ ကျန်ခဲ့ပြီး ပြန်ရှာထွက်လာတာ။
. ပြန်ပြီး အလွယ် ဖတ်နိုင်ဖို့ ဒီမှာဘဲ မျှလိုက်ပါတယ်။
၂။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြားချက်အရ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခု ဖွဲ့ စည်းပြီးကြောင်းသိရှိရသည်။
ထို့ အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ (The Environmental Law or The Environmental Protection Act -2011 ) လည်းရေဆွဲနေကြောင်းနှင့် မကြာမှီ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ကဘုန်းကျော် ရေ ရှင် ကျေးဇူးတင်ခဲ့တာလေး ပြန်ပြီး Feedback လာပေးလှည့်ပါဦးလား။
နားတို့ ပါမပါ မသိဘူး။ လက် ကတော့ မပါနိုင်ခဲ့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
သူ့ ပို့စ်တစ်ချို့ က ကိုယ် နဲ့ စိတ်မတူ လဲ တကယ်တော့ သူ့စာတွေ ထဲ မှာ နိုင်ငံ အတွက် စေတနာတွေ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ အများကြီး တွေ့နိုင်ခဲ့ တယ်။
ကဘုန်းကျော် ရဲ့ သမိုင်းပြန် အတူး မှာ တွေ့လိုက်ရတာကတော့ ထပ်ပြီး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လို့ ပြောချင်တာပါဘဲ။
“မြန်မာပြည်ရဲ့  Ecosystem ကိုမထိန်းရင် ဗမာတွေသေဖို့သာပြင်တော့။” တဲ့ Dec 18, 2011 က ရေးခဲ့တာ။ မှီငြမ်း ဆိုပေမဲ့ သူ့ အာဘော် နဲ့သူ ရေးထားတာ လို့ ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ခွဲ က သူ့ရဲ့ သတိပေးစကားက
သူများနိုင်ငံတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ကိုအတုမခိုးချင်ရင် လုပ်စရာတခုပဲရှိတော့တယ်။
ဗမာပြည်ကို FOR SALE ကပ်လိုက်တော့။
အခုတော့ အချိန်မမှီလိုက်ပါဘူး ကဘုန်းကျော်ရယ်။ ရှိသမျှလဲ ကုန်ပါပြီ။
. ရွှေပြည်ရဲ့ နေရာတော်တော်များများ ရေတိမ်နစ်နေခဲ့ပြီ။
ကဘုန်းကျော် ဒီ လို ရေးခဲ့တာလို့ မှတ်မိနိုင်သေးလား။
ဒီလို အတည့်စာ တွေသာမက အရွဲ့ စာ တွေလဲ ရေးတတ်ပါသေးတယ်။
“စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ” တဲ့။ Dec 15, 2011 က ရေးခဲ့တာ။
ဒါပေမဲ့ “Aha! Jokes, Satire” ဆိုတာ ကို လူ တွေ သတိမပြုမိလေတော့ မှတ်ချက်ပေါင်း 51 ခု နဲ့ ပွဲစည်သွားခဲ့တာ။
အဲဒီမှတ်ချက် တွေထဲ က “ဘီလူးကြီး”ogre ရေးထားတာလေး ကို သဘောကျလို့ ဒီ မှာ မျှလိုက်တယ်။
ငပျင်းအလုပ်ကိုတောင် အပျင်းပြေလုပ်ကြည့်တာ သိပ်မသက်သာဘူးဗျ
ကိုယ်မသိတာလေးတစ်ခု သူတို့သိလို့ရေးပြရင် ကိုယ်သိရတယ်
ကိုယ်မပြောနိုင်တာလေးတစ်ခု သူတိုပြောပြရင် ကိုယ်ဆီမှာသိစရာတစ်ခုတိုးသွားတယ်ပေါ့
စာရေးဆရာဆိုတဲ့ကောင်တွေက နတ်ဒေ၀တာ တွေမှမဟုတ်တာ
ဒီလိုပဲ ကိုယ်မသိတာတွေ ကိုယ်သတိမထားမိတာတွေကို
ရွာထဲ ဒီလို မှတ်ချက်ကောင်းကောင်းပေးတဲ့ လူတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဘူး တာ ။
ကဘုန်းကျော်တို့က တော့ ဝိုင်းပြောလဲ ပန်းနဲ့ ပေါက်သလို ထီဟန်မရှိ။
. ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီအချိန် မှာ သူ ကိုယ်တိုင်ဘဲ အဖေစစ်သား သားသူပုန် စာအုပ် ကို စရေးနေတဲ့ “စာရေးဆရာ” ဖြစ်နေလောက်ပြီ။
သူ့ဘဝ ကို သူ ဝေဖန်ရင်း ဒီလို စာပြောင်ကို ရေးခဲ့တာလို့ ထင်မိတာဘဲ။
ရွာထဲမှာ ၂နှစ် ကျော်ကျော်လေး ရှိခဲ့တဲ့ ကာလ ထဲ ပို့စ် ပေါင်း ၁၅၇ ပုဒ် ရေး နိုင်ခဲ့တာမို့ သူ့ စာတွေ ကို ဆက် ပြောရင်တော့ မဆုံးပေါင် ဖြစ်နေတော့မှာ မို့ ရပ်ပါပြီ။
သူ့နောက်ဆုံး ပေါ်လာတာ က “အလွမ်းပြေ တစ်ခေါက်” ဆိုပြီး Nov 26, 2013 မှာပါ။
အဲဒီထဲ ဒီလို လွမ်းပြခဲ့သရှင့်။
မန္တလေး ဂေဇက်မှာ ရန်ဖြစ်ဖေါ် ရန်ဖြစ်ဖတ်တွေကိုလည်း ဖေ့ဘွစ်ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လို့ ဖြစ်။ ဘ၀ကြီးဟာ တခါတလေ မူးပြီးဆဲနေတာထက်တောင် အရသာပိုရှိသလို။
သူကြီး “ကိုင်” ကိုလည်းသတိရတယ်။ သူကြီးသမီး ခလေးတစ်ယောက်နဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်သဲနုကိုလည်း လွမ်းတယ်။ အိတုံခေါ် ကပ်ကပ်လန်ကြီးကိုလည်း Miss ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မှာ စိတ်ကူးပေါက်ရင်း မောင်ခိုင်မာ (စမ်းချောင်း) ရဲ့ စာလေးကို တွေ့ လို့ ဝင်လည်ရင်း နောင်များမှာလည်း ရွာကြီးကို အပတ်စဉ်လည်မည်ဖြစ်ကြောင်းပါ။
အပါတ်စဉ် လာမယ် ဆိုပြီး မလာတော့တာ တစ်နှစ် ခွဲ လောက် ရှိပါပေါ့။
ဖေ့စ်ဘုတ် ထဲမှာတော့ အားပေးသူ တွေ ရာချီ၊ ထောင်ချီ ပြီး ရှိနေမှာကိုး။
ကျီး တစ်ဖုတ်ဖုတ် နဲ့ အသက်တောင် လှိုက်ရှူ နေရတဲ့ ရွာထဲ ဘယ်လာချင်ပါတော့မလဲ။
ဒါပေမဲ့လဲ အချိန်လေးများ မျှနိုင်ရင် ရွာထဲ လဲ တစ်ခါတစ်လေလောက် အလည် ဝင်ခဲ့ပါဦးလို့။
ကလေး တွေလဲ အတော်ကြီး ပြီး အရွယ်ရောက်နေတော့မှာ။
ချစ်စရာ သူ့ မိသားစု လေး လဲ အဆင်ပြေ နေမယ် မှန်းပါတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းလေးတွေလဲ ကြားချင်ပါသေးတယ် ကဘုန်းကျော် ရေ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်ချို့သော သူ့စာတွေကို အရမ်းကြိုက်လို့ like ပေးလိုက် . . (share ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားလိုက်) . . . တစ်ချို့စာတွေကျ ဆဲချင်လိုက် နဲ့ ကဘုန်းကျော်စာတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း ရူးနိုင်တယ် . . ,
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထရိုးလာ အစစ်။
အရေထူတဲ့နေရာမှာ တဂျီး ရယ် ဘဖော ရယ်ပြီးရင် အဲဒီ ရွာသားပဲ။
သူ ရွာထိန်း မှာ အချစ်ဆုံးက သဲ ရယ် တုန် ရယ် တဲ့ ပြောဖူးတယ်။
Mike says: .ရင်ထဲရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ရေးတတ်တာတော့ကြိုက်တယ်…
အောင် မိုးသူ says: သူ့ကိုတော့လေ တစ်ခါတစ်ခါတော့ ရွံမိတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဒါပေမယ့်လည်း သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
Alinsett @ Maung Thura says: စာရေးစရာဖြစ်ချင်သူ
ငပျင်းတစ်ယောက်မို့ သူ့အကြောင်းပတ်သက်တဲ့ comment ရေးရမှာ ပျင်းလိုက်တာာာာ
မြစပဲရိုး says: အဲလို ပြောတဲ့ သူ က စာရေးဆြာ ဘဝ ကို ကူး သွားလို့ လေ။ lol:-)))
Ma Ma says: အံ့များတောင် သြမိပါရဲ့။
မဲကျတဲ့သူအတော်များများက ရွာထဲမှာ တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားနေကြသူတွေချည်းပဲလို့ ထင်မိလို့။
ကဘုန်းကျော်ဆိုရင်လည်း သူ့ဟန်သူ့စတိုင်အတိုင်း မာမာတင်းတင်း ရှိပေမယ့်
သူ့ရဲ့ ချွန်ထွက်နေတဲ့ အတွေးအရေးတွေကိုတော့ သဘောကျမိသား။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်တစ်ချက်
ကိုလတ်ကြီး မဲပေါက်တဲ့သူတွေက ရွာနဲ့အတော်ဝေးဝေးရောက်နေသူတွေ လေ
ဘုန်းကျော်က တော့ သူ့အတွေးနဲ့သူ ဆိုောတ့ မှားတယ်လို့မဆိုလိုပါ
ကျနော်ကတော့ သူ့ ပြောတဲ့လေသံကိုသဘောမကျ
အဲတော့ ဖတ်တော့ ဖတ်ဖြစ်တယ် မမန်းတာများတယ်